"नाकावन्दीका डिजाइनर" जयशंकरलाई कालो झण्डा देखाउन फणीन्द्र नेपाल तम-तयार !
काठमाडौँ – ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरलाई कालो झण्डा देखाउने घोषणा गरेका छन्।
नेपाल भ्रमणमा जयशंकर आउँदा उनलाई कालो झण्डा देखाउने नेपालले घोषणा गरेका हुन्। बुधबार सामाजिक संजाल मार्फत कालो झण्डा सहित अध्यक्ष नेपालले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
“भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आज ११:५५ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रने ।”,फेसबुक मार्फत फणिन्द्रले घोषणा गरेका छन्।
यस्तै ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको तर्फबाट एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले जयशङ्करको नेपाल भ्रमणको विरोध गर्न पनि आह्वान गरेका छन्। मंगलबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले यस्तो आह्वान गरेका थिए।
नेपाल विरुद्ध दुईवटा नाकाबन्दी लगाउने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत सिमानामा बाँध बाँधेर नेपाललाई डुबाउने, दिनदिनै नेपालको सिमाना मिच्ने देशका विदेशलाई नेपालमा स्वागत गर्न नहुने भन्दै कालो झण्डा देखाउन लागिएको विज्ञप्तिमा फणीन्द्रले उल्लेख गरेका छन्।
“नेपाल विरुद्ध दुईवटा लामो समयका नाकाबन्दी कसले लगायो ? कसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत सिमानामा बाँध बाँधेर हामीलाई डुबायो ? कसले नेपालको सार्वभौमसत्ताको अपमान गर्दै कालापानीमा सेना राख्यो ? कसले दिनदिनै नेपालको सिमाना मिच्ने क्रम जारी राखेको छ ? कसले नेपालको राजनीति र प्रशासनमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ? कसले नेपालको संविधान घोषणा गर्नबाट रोक्ने दुष्प्रयास गर्यो ? सबै भारतले ।”,विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
भयङ्कर भूकम्पबाट थिलथिलो भएका नेपालीमाथि अमानवीय रूपमा नाकाबन्दी लगाउने र संविधान घोषणालाई प्रभावित पार्न खोज्ने एस जयशङ्करले नेपालको भूमि नै अपवित्र हुने बताउँदै अध्यक्ष नेपालले खुलेर उनको विरोध गर्न आह्वान गरेका छन्।
नेपालमा नयाँ संविधान जारी गर्ने बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत बनेर नेपाल आएका एस जयशंकर नाकाबन्दी लगाएका बेला विदेश सचिवको जिम्मेवारीमा थिए।
२०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी गर्नुपूर्व नेपाल आएर जयशंकरले संविधान जारी नगर्न दबाव दिएको, तर भनेको जस्तो नभएपछि उनकै डिजाइनमा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको बताउने गरिन्छ।